Four-in-imwe mbabvu kubva kupanana AC convergence revatema zvinoumba AMJ2-4003H / 1003HX4 - China Shanghai IPKIS
Temperature uye Humidity Controller
User kuti Guide
Four-in-imwe mbabvu kubva kupanana AC convergence revatema zvinoriumba AMJ2-4003H / 1003HX4
Overview AMJ1 busbar revatema chinoumba chinhu modular unobva chinoumba mazano IPKIS nokuda-danho matatu multi-bazi bazi ano kusangana. Chidziro chisingazununguki chiine akanaka, uye kubatana zviri nyore uye njodzi. Achishandisa modular design, asi yakaoma kuvhiyiwa The panoparadzana mutsetse iri nyore kuti kungotaura sungisa aine sikurudhiraivha. Panguva iyoyowo, iyo module inogona spliced ​​maererano chaiko bazi zvinodiwa, runokuponesai zvikuru basa mutengo uye nzvimbo cost, uye connec ...
AMJ1 busbar revatema chinoumba chinhu modular unobva chinoumba mazano IPKIS nokuda-danho matatu multi-bazi bazi ano kusangana. Chidziro chisingazununguki chiine akanaka, uye kubatana zviri nyore uye njodzi. Achishandisa modular design, asi yakaoma kuvhiyiwa The panoparadzana mutsetse iri nyore kuti kungotaura sungisa aine sikurudhiraivha. Panguva iyoyowo, iyo module inogona spliced ​​maererano chaiko bazi zvinodiwa, runokuponesai zvikuru basa mutengo uye nzvimbo cost, uye kubatana akanaka chaizvo.
Soft kwokubatana Shandisai nembariro nyoro mhangura kubatanidza haizoshandisi uye busbars
Hard kwokubatana dzinoitwa kushandisa mbariro emhangura uye busbars
Dzinenge miganhu maererano chaiko kudiwa kuona nokurondedzerwa, tapota inotipa kushandisa kudiwa queries.
Revatema bhazi AMJ2integrated busbar
Main chinja 400A-danho matatu rakaumbwa nyaya chinja
Sub-chinja 100A-danho matatu rakaumbwa nyaya chinja
Main kubatana nyoro kubatana
Sub-kubatanidza nyoro kubatana
● yepakuvamba pachena mhangura pamakumbo mugomba modular chinja iiswe zvakananga.
● zvigadzirwa dzinogona kurongwa nenzira dzakasiyana-siyana: mbabvu, rinotevera ufambe, kunze raitevera.
● module wedu anogona kuva zvose nyoro musara pamakumbo, kuti chinja zvakananga pamusoro module, chinjika spacing, achidzikisa zvikuru chassis nzvimbo.
● Our mutsara mukuru uye Sub-pamusara yakarongerwa kiramba chivako, akakodzera zvakasiyana nokurondedzerwa pemhangura rave rinopfuurira, chinja diversification urongwa, kuti zvinodiwa siyana vatengi.
● unodzivirira goko pamwe PA66 zvinhu.
● Chinangwa chikuru musara yepamusoro mhangura.
● bhazi pfupi budirira kuitika (Icw): 18KA kumusoro;
● kuuya kubatana:-danho matatu / mana-danho 250A ~ 800A, zvakaoma nyoro kana mutsara;
● busbar: yakakwirira conductivity mhangura nickel yakanamirwa pamifananidzo;
● unodzivirira goko: PA66;
● busbar ukobvu: yavose sezvavakatarirwa pa 4-10mm;
● bazi kubatana: anopfuura maviri-danho-danho matatu / kupfuura 63A, zvakaoma nyoro kana mutsara.
Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd. ritaure Integrated combiner bhokisi gadziriro uye ancillary zvivako, zvemagetsi simba kuparadzirwa kwakakwana anogadza kutsvakurudza zvemagetsi kubatana zvemichina uye kukura uye kushanda kwesayenzi mari gore negore, kuti bvumidzwa chikumbiro rakabvumira paumbwe imwe akanaka denderedzwa, kwesayenzi kushandurwa ndiyo inogutsa, Shanghai Tech Enterprise; kambani zvakanaka panguva nyanzvi uye michina zvakwakanakira kuti hurongwa kambani kupa magetsi kubatana zvinogadzirisa, dzedu kwounyanzvi, nenguva uye kukurumidza pamwe, kuti asike zvimwe chaiko vatengi, uye vatengi vanoumba pedyo ichitsigira ukama, kuburikidza akawanda It akaumba mumwe yakasiyana mabhizimisi womuenzaniso uye akasimbisa ane zvipenyu nezvakazvipoteredza denderedzwa mumutsara pamwe utano kukura akaitwa. Mukutonga kuitika nezvekwakatorwa overcapacity, rwokugadzirwa upgrading uye mumaindasitiri kusangana, zvakakodzera vanoshingaira kuongorora pfungwa itsva inodzivirira kukura akaitwa duku.
Product unhu ndiye kadhi basa redu, nokuti unhu tinoramba mediocrity. Tiri pamusoro mashoko, chichiitwa kuvandudzika, uyu chitupa, ndiwo mumiririri IPKISer ose kubasa.
Previous: Back-vakatasva mana-in-imwe photovoltaic AC convergence revatema zvinoriumba AMJ1-2503S / 0633SX4
Next: Dzakaonda nhanhatu kuva photovoltaic AC convergence revatema zvinoumba AMJ2-4003H / 1003HX6
180a Electrical Distribution Box
6 Muna 1 Combiner Box
Dc Electrical Distribution Box
Portuguese Array Combiner
Portuguese Array Combiner Box
Portuguese Array String Combiner Box
Portuguese Panel String Box
Portuguese Solar ukomba Combiner Box
Solar Ip65 Combiner Mabhokisi
Solar ukomba Dc Combiner Box
Back-akasungirirwa pasi nzira kupinda photovoltaic AC Co ...
Back-Hung matatu-in-imwe photovoltaic AC wekuita ...
Finessi epurasitiki bhokisi
Pork masere kuva photovoltaic AC convergence Ini ...
Back-akatasva maviri-in-imwe photovoltaic AC converg ...